On Shrovetide - amaculo Folk, izinkondlo izingane, funny ditties abadala, carols zezingane. Izinkondlo kanye nezingoma zokuthethelela ngeSonto
I-Shrovetide iyiholide lezwe elijabulisayo - lihlobene nemikhuba yobuqaba ukuze ibone izinsuku ezincane zasebusika, ilungiselele ukushisa kwentwasahlobo. ERussia, iviki leShrovetide lihlala lingaphambi kwe-Great Post, liphela ngemiphefumulo yokuhlanza ezonweni Ukuxolelwa ngeSonto. Ukushayela zonke izinsuku eziyisikhombisa zengoma yePancake ngesonto, ukuxubana ngamakhansela, ukubheka izivakashi kumakhelwane, ukufunda ama-carols weviki le-Pancake, ama-Orthodox alungiselela izinsuku ezingamashumi amane ngokuvinjelwa okunzima, hhayi kuphela ekudleni inyama nemikhiqizo yobisi, kodwa nokuzijabulisa kanye nemikhosi. Yingakho isonto likaShrovetide - kusukela osukwini lokuqala kuze kube sekugcineni, ukuthethelelwa kokuthethelela, kugubha ngendlela enjalo. Phakathi nesonto lokugubha (futhi ngo-2017 lokhu ngoFebruwari 20 kuya ku-26) emadolobheni aseRashiya kunezinhlangano zemikhosi, imikhosi yabantu, lapho i-chastushki ihlaselwa eShrovetide. ERussia lezi zinsuku zokugcina zamakeke zamake, zikhumbuza ukuma nombala welanga, e-Ukraine naseBelarus ziphathwa nge-curd namanzi kanye ne-vareniki. Izingane, iSonto leShrovetide liholide langempela. Amadoda agibela ama-sleigh (emadolobheni - ngamahhashi), akha izinqaba zeqhwa, ukudlala i-snowballs, amadolobhana amancane ngaphandle kweqhwa. Ekugcineni, zibhubhisa okwakhiwe, "ukusiza" ukuncibilikisa iqhwa elisondela entwasahlobo. Abantu abasha bajabulisa umphakathi ngokuhlela ama-fisticuffs. Iviki lonke ngaphambi kokuba iLente Elikhulu lihambisane nemidanso, amakhonsathi, ama-artists ahlabelela izingoma zomculo nezingokwenkolo, ukukhumbula izinkondlo zeviki lePancake. Uma ufuna izinto eziphathelene naleli holide, izinkondlo ezincane kanye nezingoma, ama-carols kanye nama-ditties, uzothola zonke izinto ezikuleli khasi.
Izingoma zomculo zomkhosi we-Shrovetide - Izingoma mayelana nokuhlaselwa ebusika kanye namasiko eShrovetide
Phakathi nomkhosi wonke weCarnival, ngaphandle kokugcina kwezinsuku zakhe - Ukuthethelelwa kokuthethelela - kuyisiko ukuba abantu bahlabelele izingoma zomdabu, amadansa, amadansa omdanso. Ingoma ngayinye yalezi zingoma ziyisibonelo - eziningi zazo zichaza izinsuku zeSonto lamaShrovetide (Umhlangano, Ukuzijabulisa, Ukudlala Ngothando, njll.) Amazwi alawa maaculo abhekisela enjabulweni eyabangelwa ukushisa ebusika kanye nendlela yokusabalalisa. Kusukela ngeviki le-Pancake futhi liyiholide lomndeni, lapho abagogo bejwayele ukujwayela abashadikazi, abayeni abasha bavakashele umamazana wabo othandekayo ukuzama ama-pancakes, abadlali bemidlalo yokudumisa abashadile, izingoma eziningi zemikhosi zakudala zichaza nje lezi zithethe zamaslenits. Ezingoma zanamuhla ze-jocular ngeviki le-Pancake, kuvame ukuhlabelelwa ngokuthi i-mono ingakwazi kanjani "ekugcineni" ukudla nokuphuza - Shrovetide Maslenitsa utshela ukuba udle futhi ujabule ngayo yonke inhliziyo yakho!
Futhi silinde imikhosi, Siyilinde, umphefumulo, silinde. Ushizi namafutha esweni emehlweni, Niyabo, umphefumulo, niyabo. Njengawegquma lama-oki aluhlaza, iZelenenek, umphefumulo, oluhlaza. Futhi uVanyusha, umngane wami, osemncane, Omncane, umphefumulo, omncane. Maslenitsa wethu, ujabule, Jabulela, umphefumulo, ujabule. I-grushka yethu ibe yi-sloping, ibe yi-sloping, umphefumulo, yi-sloping
Iviki le-Pancake selifikile, Isivakashi sethu siyathandekayo! Akafiki kithi ngezinyawo, Konke kufike kumikhonto. Izigaxa zaso zimnyama, Zinezinhlamvu zegolide, Futhi zinezinhlamvu eziqoshiwe.
Kukhona i-Shrovetide eqhweni, ithwala i-pancake pan. Thatha kubantfwana - Hlanganisa i-pancake!
Shrovetide, ukhuphukela phezulu entabeni, Sitshele ukuthi ususe ukusa. Futhi ngaphansi kokuntwela kokusa - i-nightingale, Kancane, ngesonto.
Yiziphi izingoma ezicula ngeShrove ngoLwesibili - Izingoma mayelana neStrovetide Maslenitsa
Isonto ngaphambi kokuba i-Lent Great ibizwa ngokuthi i-Shrove Carnival, njengoba kunjalo ngalezi zinsuku bonke abantu base-Orthodox bahambahamba, bekhohlwa ukukhathazeka nokusebenza. Ngokushesha nje lapho bebiza iShrove ngoLwesibili ezingoma! Ubizwa ngokuthi u-Deceit, Greedy, Blinoda, noMninimzi othandekayo. Ezingoma zomculo ngamunye ezisehlele kithi, zichaza amasiko kaMaslenitsa kanye nemikhosi ejabulisayo. Izingoma zezingoma ezinjalo zilula futhi kulula ukukhumbula okokuqala. Kuleli khasi uzothola imibhalo yamaculo omculo. Bakhumbule ukuthi bazofeza ngoFebhuwari 20-26, 2017. Maslenz - ipencake, Maslentsa - zhilyroda, Maslentsa - shaby, Maslenz - inkohliso. Siyakhohlisiwe, siphethwe, Asizange sinike ama-pancake. Siphe i-pancake Siyi-podgy Futhi siyaningiwe! Futhi sambingelela uMaslenitsa, Sikulinganisela kakhulu: - Maslyana othandekayo ubuyele emuva, Kuze kube yilapho ebomvu ehlobo selula! Maslyana, Maslyana, Uya kuphi? Ngilahlekelwe amapayipi ami. - Ngeke! I-Pancake-pancake Wonke umhlaba ukhathele, Ukhohlisiwe, ubanjwe, uGodika akazange aphile.
Shrovetide wethu othandekayo, Avdotyushka Isotyevna! I-Dunya emhlophe, i-Dunya enesibindi, i-Braid Long, i-triarcinna, i-Ribbon ebomvu, izinwele ezimbili, i-White shawl, entsha, ama-Black, ama-Inferno, i-Fur coat blue, ama-sweatshirts abomvu, izicathulo ze-Bast zivame ukuhamba, Ama-footstock ezimhlophe, amhlophe!
Awusanga ngoLwesithathu hhayi ngoLwesihlanu. Uze ngeSonto, Wonke amasonto omnandi. Weza kahle, Nge ushizi, ibhotela neqanda, Ngama-pancake, ama-pie Yebo ngama-pancake. Amapancake ngamafutha, i-Shanji puff pastry. Sihamba sisuka entabeni Kusukela ekuseni kuze kube sekuseni. Futhi namuhla entwasahlobo Injabulo yethu izophela. Ukuhle, ukuhleleka, Ukuzibophezela kwethu.
I-Shrovetide ilanga, izwe lonke likhathele, likhohlisiwe, ligcinwe, iGodika ayizange iphile ukuze iqedele ukuthunyelwa. Wafika ohlangothini, Ezindaweni zangasemuva, emigwaqeni yangemuva, ngithwala ama-pheasants cast-iron, i-Nodvala esiswini! Blinov baked, Wadla konke ngokwakhe, Futhi wasinika umsila for the isithombo! Ukuhamba okujabulisayo, izingoma ezedlaliwe, Ezihlelwe kokuthunyelwe, - Burn, uSathane!
O, Maslenitsa, mkhohlisi! Oh, thina Shrove Carnival, Sihlangane, silala phansi, sasihlangana, Thina sixoxela ushizi nge mullet oyelayo, Saqala, silala phansi, thina wasibeka.Waqala up the blinkes, We wahamba, wabeka, wabeka, Thina wathela amanzi phezulu nge masseuse, Wathela, wancipha, wathela. Njengoba usuka entabeni, intaba isiphezulu, intaba iminyene, izintaba ziphakeme, futhi intaba icacile, intaba icacile emafutheni, intaba icacile, izintaba zicacile, ngakho-ke nangu isonto lePancake. Amantombazane akhe Futhi ushiye isivakashi: "Yebo, kukhona uMaslenitsa, kanye neviki le-pogostyu, futhi uhamba, Futhi u-pogostyuy omunye!" - "Yebo, nansi amantombazane, futhi ngesaba ukuthunyelwa!" - "Yebo, lokho kuyi Shrovetide, Ukushesha kusekude!"
Izinkondlo ezincane ezimnandi zeviki le-Pancake izingane - Izinkondlo zezingane ezinhle ngeSonto leMaslenitsa
Maslenitsa ivame ukugubha ezinkulisa nezikole. Izinkondlo zezingane ezincane ezitholakalayo nsuku zonke zeholidi likazwelonke ziyohlobisa umcimbi wezingane, ikhonsathi yemikhosi. Njengoba imibhalo yamavesi iqukethe amagama amaningi asendulo akuqondakali ngaso sonke isikhathi kumntwana wanamuhla, afundise kanye nezingane, echaza incazelo yesikhathi ngasinye esihlangane nayo. Indlela engcono kakhulu yokubamba ngekhanda amavesi ngeShrove ngoLwesibili ukubiza zonke izinkondlo. Mhlawumbe izingane ezincane ngeke ziqonde kuze kube sekupheleni, kuthiwani kulokhu noma lelo vesi - dweba isithombe, echazwe yivesi. Ngakho-ke ingane izoba lula ukufunda imiqondo emisha ngaye. Ilanga lehlobo lokushona Ilanga liyindilinga njenge-pancake, Ukumamatheka kukhanya. Ngiyajabula ukuhlangana naye ngokufudumele Abantu abadala kanye nezingane.
Ukupheka Maslenitsy Njengasevikini lamafutha Kusuka ku-pancake ye-ovini! Ngokuzikhandla, ngokushisa, kusuka kuhhavini, Yonke i-rouge, eshisayo! Carnival, aphathe! Nikeza wonke ama-pancake. Ngokushisa, ngokushisa - kuhlakazeka! Ungakhohlwa ukudumisa.
I-pancake week- killer, i-snowcake sister-killer, udadewabo weqhwa ebusika, Kithina ku-prichchitsya ama-pancake asetsheni! Masters uzovuka ehhavini ukuphendulela, Uzocabangela, futhi azibuze ukuthi angayithanda kanjani intombazane. Ama-pancake anamakha, ama-pie amnandi anezinhlangothi ezinomvu obomvu Sizoqala ukuvuka ilanga, Masijabule!
Shrovetide Maslenitsa okuhle Ukuhamba lonke isonto kusuka enhliziyweni! Bhaka ama-pancake, ama-pancake, amahloni, uRuddy, njengelanga. Kuhle! Umdanso womdanso ozwakalayo udumile, uhlabelela, bonke abantu abathembekile bahleka. Spring ihlangana noMaslenka-ubuhle. Thola ubusika, ngikubone ngonyaka ozayo!
Izinkondlo ezimangalisayo ngosuku lokugcina lukaMaslenitsa - Kunikezelwe eSonto Lesithembiso lembongo
Uyazi kakade ukuthi usuku nosuku lweMaslenitsa lunencazelo yalo kanye negama. Mhlawumbe okubaluleke kakhulu kwezinsuku zeCarnival yiSonto Elixolelwe. Kulolu suku, ama-Orthodox aya emathempelini, evuma kumpristi. Lapho bebuyela ekhaya, bacela ukuthethelelwa kubo bonke abantu abaye babulawa kabi noma abangenangqondo, baye baletha intukuthelo noma ukudumazeka. Usuku lokugcina lwesonto ngaphambi kweLente Elikhulu libizwa nangokuthi i-Tselovalnik, iSonto, iSyrovodie. NgeSonto, isonto lokugcoba emgcekeni omkhulu womuzi noma idolobhana, iShrovetide enezintambo igqoke izingubo zabesifazane. Ngakho-ke bathi bangena eqhweni, bebevele benokwanele ngokwanele kwemvula yabo ebandayo, iqhwa namaqhwa ebusika. Ngemuva kwalolu suku, abantu abakholwayo bavakashela isonto, becela ukuthethelelwa komunye nomunye, abefundisi kanye nezihlobo. Kuze kube manje, kokubili emadolobheni nasemizaneni, umkhuba wamathuna okuvakashela abesifazane uye wagcinwa. Ukuya emathuneni wezihlobo, bephethe amaphakheji lapho, abesifazane bacela ukuthethelelwa kwabafileyo. Ngakho-ke, umkhosi wokuhlanzwa okungokomoya usuphelile ngaphambi kweLente Elikhulu. Kusihlwa kokuthethelelwa kovuko, ukwelashwa kuhlelwe wonke umuntu, kodwa akukho nyama noma iziphuzo ezidakayo ezenziwa ngaleso sikhathi. Yonke le masiko nemikhuba ichazwe ezinkondlweni eziphawulekayo mayelana nosuku lokugcina lweCarnival - Ukuthethelelwa kovuko. Uma wena wedwa, Kuyoba nokuthula njalo nawe. Uma uhlala ngobuqotho, uNkulunkulu angakhonza ngokukholwa. Ungamcasuli muntu, Futhi ufune ukuthethelela, uNkulunkulu uzokubusisa, Zonke izono zakho zizokuthethelela. NgeSonto elithethelelwe, Yamukela, mfowethu, sihalalisele!
Namuhla usuku olukhethekile - Ukuthethelela ngeSonto. Ngizokuthola namuhla Kuzo zonke izinto engizozicela ukuthethelelwa. Chayano noma ngokungangabazi ngikucasule ngento ethile, Kuzo zonke engizozicela ukuthethelelwa. Ngabona isayithi "Ukubingelela" futhi ngakuhalalisela lapho. Ngathola konke ngamaholidi. Ngalokhu ngiyaxolisa. Ngikuthethelela isikhathi eside, Njengoba nje inhliziyo yami ingiyala. Futhi uNkulunkulu makasithethelele!
Iholide eliqhakazile liza, Ukuthethelela kukhuthazana. Usuku lweSonto lunikeza injabulo, iNkosi izasisindisa esimweni esibi sezulu. Makube khona ukukhanya endlini yakho, Vumela injabulo ihlale iminyaka eminingi. Sishisa uthando emphefumulweni wakho, mfudumise, Mlilo wethemba, akuvumeli ukukhala!
Amathithi amancane yezingane eShrovetide - Imibhalo yezinti zezingane ezihlekisayo zeviki le-Shrovetide
I-Shrovetide iyiholide lezingane elinde isikhathi eside! Ubusika usuvele ushiye, kodwa iqhwa lisalokhu lilele - ungakwazi ukugibela i-roller coaster, udlale i-snowballs, wenze i-snowman, ugibele intaba ku-sleigh noma i-ski. Futhi mangaki amakhekhe namakhake amnandi okomnandi alindele izingane ekhaya! Kuyoba khona ukudla okwanele kuwo wonke umuntu - kuyobe kushiywe nabangani nabajwayelene nabo. Imibhalo yamathithi amancane wezingane eShrove ngoLwesibili sitshela mayelana nokuzijabulisa kwezingane, izintambo zobusika kanye nomhlangano wezentwasahlobo. We chastushki sing, Singalindela kanjani iviki lePancake, Indlela esiyilangazelela ngayo ama-pancake Futhi ngezinsuku zasentwasahlobo efudumele.
Sinawo wonke umuntu othembekile ohlabelela u-chastushki, umama we-Winter usechitha Futhi entwasahlobo izohlangana.
Zijabulise, abantu abathembekile, Ngokuvakashelwa uMasena uzoza! Kusuka enhliziyweni yokuhlangana kwakhe, Zonke ama-pancake aphathe!
Sisevikini lamafutha Asizange siphule iHholide, Bonke abangane badansa, bacula, Yebo, ama-pancake adliwe!
Umdala omnandi ukhuluma ngeShrovetide - Imibhalo yeMaslenitsa ditties yabantu abadala
Ungalahleki ngemuva kwalabafana nabantu abadala - ukucula izingoma, ngamandla nokuzijabulisa okukhulu, ukugubha i-Shrove Carnival! Kusukela phakathi neSonto lonke leShrovetide, ngaphandle kweSonto Lokuthethelela, lamukelekile ukuphuza nokudla ngokugcwele, isimo sengqondo sazo zonke lezi zinsuku sikhuphuka ukuze umphefumulo ucele ukucula nokudansa. Funda amathidi ambalwa amahle kubantu abadala bese uhleka izivakashi eziza kuwe.
Unina-ubusika, sabeka umlilo - Ngaso leso sikhathi imvula ishaye. Ngokushesha sicabanga - Endlini sizobamba umlilo ebusika.
Sasidla idili, ukugubha iholidi. Etafuleni, ukudla kukhohliwe - Amakati ajabule ukulungisa.
Ngemuva kweMaslenitsa ngokuzwakalayo Sisebenzela isiphuzo. Khumbula okuningi esikudingayo - Emva kokuphuza sizokhipha isinqumo.
Ngomzungezo baqhuma kanjalo Izintombi zami ngomlilo, Zangikhathaza - Uyangithethelela.
Ama-carol car Folk Christmas for the Weekly Pancake for kids
NjengaseKhisimusi, kuyisiko ukuba izingane zenze ama-carol folk for Shrovetide. Imikhuba yokugubha imikhosi yaseKhisimusi ifana kakhulu nezingoma zikaKhisimusi ezimfushane zikaKhisimusi. Izingane zihamba ezungezile emagcekeni, zizihlabelela e-chorus futhi zithole usizo - amaswidi nama-pancake asanda kubhaka. Uma ufuna indodana yakho noma indodakazi yakho ukuba iqhaza emikhosini yabantu eShrovetide, funda kanye namatheksthi wengane yomcimbi wezingane zokugubha iholidi. Tin-tinka, Khonza i-blink, i-Pancake-ankle, u-Oily piece! Madadewethu, ungabi yisisindo, wabelane ngesiqephu samafutha!
UMaslena weza ngesonto, ngangisepanda ngamapancake. I-kuma yayinedadewethu, ama-pancake okuthiwa yi-Furnace into ethile. Wabhaka ibutho lesithupha. Abayisikhombisa babo abadli. Futhi abane bahlala phansi etafuleni, isikhala seDali sasikhala, sabheka futhi .. .bonke badla!
Njengaseviki lamafutha Kusuka ku-pancake ye-ovini! Ngokuzikhandla, ngokushisa, kusuka kuhhavini, Yonke i-rouge, eshisayo! Carnival, aphathe! Nikeza wonke ama-pancake. Ngokushisa, ngokushisa - kuhlakazeka! Ungakhohlwa ukudumisa. Lapho ulungiselela ukuhlangabezana neSharve Carnival, gcina hhayi nje kuphela ngofulawa, ibhotela, amaqanda nemvubelo ngokubhaka uphawu oluyinhloko lweholide - ama-pancake. Khumbula amasiko abantu namaculo weviki le-Pancake. Ukubhekana nezinkondlo ezimfushane zakwaShrive ngoLwesibili, zinikeze ukuthi zifunde ngesonto eledlule ngaphambi kweLente Elikhulu. Vumela abafana bafunde ama-carrots amahle kakhulu e-Shrovetide, tshela omakhelwane babo futhi baziphathe ngokwabo ngamaswidi, ama-pancake ashisayo nama-pie ngokugxila. Uma abantu abadala befuna ukuphumula futhi bajabule enhliziyweni, behambisa ubusika obandayo futhi bamukela indlela enhle entwasahlobo enhle, bangathola njalo i-chastushki eMaslenitsa kuleli khasi bese belihlabelela ngoFebhuwari 20-26, 2016. Ngesikhathi behlala evikini leShrovetide, khumbula, ukuthi ngosuku lokugcina lweholidi - Ukuthethelela ngeSonto - asisadli noma iyiphi inyama yokudla, noma uphuze iziphuzo ezinamandla. Lesi yisikhathi sokulungiselela ukugcina ngaphambi komhlangano weLente elide, ehlala amasonto ayisikhombisa.
Indlela yokugubha i-Halloween esikoleni - iskripthi sabafundi besikole esiphakeme, ividiyo. Ukuhambisana nezandla zakho zesikole i-Halloween
Imidwebo emihle yoSuku Lothisha kusuka kubafundi bezigaba eziphambili neziphezulu. Umdanso omuhle ngosuku lukaMfundisi webanga lesi-1-5 no-10-11
Izithombe-siyakuhalalisela ngoSuku lukaMama 2017: enhle ngemibhalo ebhalwe phansi evela kubantwana
Biography of Andreichenko Natalia
Amaphutha amakhulu amaholide asehlobo anezingane
Ukuphila ngokobulili kwabasha
Ilayisi nama-mushroom nemifino yabantu abashadile
Yimaphi amantombazane enhle kakhulu?
Inkukhu nge-apula kanye ne-sage
Izitayela ezithandwayo zebusika ekwindla ka 2009 - 2010